Akụkọ - Olee otu esi mepụta igbe mbukota?
Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ nke oge a na ọganihu na-aga n'ihu nke ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ, ọchịchọ ndị mmadụ na igbe mbukota ga-aga n'ihu na-abawanye. Ya mere, ndị na-azụ ahịa ugbu a na-ebute ọkwa dị elu maka ogo igbe. Yabụ ọ chọrọ itinye teknụzụ ọhụụ na usoro mmepụta, ma na-emeziwanye ọkwa akpaaka nke akụrụngwa. Naanị mgbe ị na-emegharị mgbanwe ọhụrụ ahụ ma na-emezu ihe ndị ọrụ dị iche iche chọrọ nwere ike iburu igbe ụlọ ọrụ ga-eme ka asọmpi ha ka mma.
Ọ bụ ahịa ka a ga-anwale ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ma ngwa ahịa ọ nwere ike ịnwe ezigbo ahịa ma ọ bụ na ọ bụghị. Nkwakọ ngwaahịa na-arụ ọrụ dị oke mkpa na usoro ahịa niile. Ọ na-agwa ndị na-azụ ahịa okwu site na onyonyo ya pụrụ iche, na-eme ka ha nwee mmasị na ngwongwo ahụ na nke mbụ. Ka ahia ahia na-amalite na China, imirikiti ndị na-azụ ahịa na-aghọwanye ndị nwere ọgụgụ isi. Nke a abụghị naanị na ọ na - eme ka nsogbu nke ire ngwaahịa na - abawanye, kamakwa ọ na - eme ka igbe igbe nkwakọ ngwaahịa zute nsogbu na - enweghị atụ.
Akwụkwọ Onyinye igbe
Site na mmepe na-aga n'ihu nke akụ na ụba mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ike nwayọ nwayọ nke ahịa ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ emeela ka mmepe nke nkwakọ ngwaahịa. Chọrọ ịme ngwaahịa nke gị pụọ na igwe mmadụ, igbe nkwakọ ngwaahịa ejirila nwayọọ nwayọọ bụrụ isi nhọrọ. Ndị mmadụ na-eji mkpokoro nkwakọ ngwaahịa gosipụta mmetụta ha, yana mmelite nke ihe ibi ndụ na ibi ndụ ime mmụọ, a na-etinyekwu nlebara anya na nkwakọ ngwaahịa.
1. Gosiputa ihe nkwuputa mbu: enwere ike ihu nkwuputa ihe di n'ime ya site na nkwuputa ndi ozo, nke ndi na-eri ahia na-ewu ewu. Ọ bụ ezie na enwere ike nweta mmetụta a site na mmeghe nke kaadiboodu, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ika na-ahọrọ iji mezuo ebumnuche a site na ngwakọta nke nkwakọ ngwaahịa-itinye windo plastik na ngwugwu kaadiboodu. Kaadiboodu na plastik ga enwe uzo di ire na odi n’ihu.
2. Textured ihe: Textured ihe aghọwo nnọọ ewu ewu na ịchọ mma nkwakọ. A na -emepụta udidi site na ịmepụta ihe na mpempe akwụkwọ. Mgbe ndị mmadụ buliri ya, ha na-ahụ na ọ na-enye ya mmetụta nke dị iche na ọkọlọtọ ma ọ bụ kaadiboodu dị mma. Ọ bụ ezie na njedebe ikpeazụ nke iji ire ụtọ ma ọ bụ matte bụ karịa, ọtụtụ ndị ahịa ka na-ahọrọ mmetụta matte jikọtara ya na ihe ederede.
E biri ebi Akwụkwọ Box
3. Ihe na-egbu maramara ma na-egbukepụ egbukepụ: Na igbe nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma, ngwugwu nke ihe na-egbu maramara ma na-egbuke egbuke amalitela ịpụta iji mezuo ebumnuche nke adọta nku anya. Mmetụta pụrụ iche, agba na ihe ọla na-esonye n'usoro a. Ndị na-emepụta ihe na-agba mbọ ịiche ngwaahịa ha site na nke ọhụụ a, mana n'otu oge ahụ payaa ntị na ọnụ ahịa ha. Yabụ, ụzọ iji nweta ọdịdị a na ịchekwa ego bụ iji ink ọla ma ọ bụ gloss na-ebi akwụkwọ. Ọrụ nke mmanụ pel. N'ọdịnihu, anyị ga-ahụ igbe ịchọ mma ndị ọzọ na-egbu maramara na ahịa.
4. Oddly-shaped box shape: Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ ụdị igbe nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, na-achọ mgbanwe ụfọdụ na-emebi ọdịnala kama ọdịdị ọdịdị. Mgbanwe ohuru ohuru na mpaghara a bu ojiji ogwu ogwu ejiri plastik.
Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ nke oge a na mmụba na-aga n'ihu nke ụkpụrụ obibi ndụ ndị mmadụ, ọchịchọ ndị mmadụ maka igbe nkwakọ ngwaahịa ga-aga n'ihu na-abawanye.
Post oge: Sep-28-2020